PressReader - Ilanga: 2019-01-07 - I-KZN IZISHAYA ISIFUBA KWI- NE-
I-KZN IZISHAYA ISIFUBA KWI- NE-
Ilanga - 2019-01-07 - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE [email protected]
UYIFANISE nekhaya leSayensi neMathematics iKwaZulu-Natal ungqongqoshe wezemfundo kulesi sifundazwe, uMnu Mthandeni Dlungwane, ngenxa yokuthi ihambe phambili uma iqhathaniswa nezinye izifundazwe kulezi zifundo zombili ezesatshwayo.
Lokhu ukusho ngoLwesihlanu ememezela imiphumela kamatikuletsheni yango-2018, eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC), eThekwini. Uthe izinga lokuphaswa kweSayensi lisuke ku-65.1% wanyakenye laya ku-73.6% kanti ngo-2016 beliwu-56.7%.
Akakushiyanga ukuthi iKwaZuluNatal iphase yafinyelela ku-76.2%, isuka ku-72% wangonyaka odlule. Utshele izinkumbi ebezibuthene e-ICC ukuthi kulo nyaka uzibekele u-85% okumele utholwe yiKwaZuluNatal ukuze ibalwe nezifundazwe ezihamba phambili.
Ubonge kakhulu othisha ngokusebenza kwabo kanzima nokubambisana okuhle phakathi kwabo nezinyunyana. “Sisazoqhubeka nokuqhamuka nezinhlelo ezintsha zokusebenza kanzima ukuphucula imiphumela ukuze sikhuphule isifundazwe siqhwakele phezulu.
"Wonke umsebenzi omuhle owenziwe ngothisha, siyabonga kakhulu,” kusho uMnu Dlungwane. Izinga lokuphasa KwaZulu-Natal lenyuke kakhulu ngoba bawu-38 573 abafundi abaphase ngendlela yokuba bamukeleke emanyuvesi (Bachelor’s).
“Ukunyusa izinga lamaBachelor ngalolu hlobo, kuyasithokozisa ngoba kukhomba ukuthi sikhiqize ikhwalithi. Siyethemba ukuthi nasezikhungweni zemfundo ephakeme bazomukelwa," kusho uMnu Dlungwane.
Uthe ngo-2016 iMaths iphaswe ngo37.9%, kwathi ngo-2017 isifundazwe sanyukela ku-41.9%.
UNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, uthe iKwaZulu-Natal, i-Eastern Cape, iGauteng, iLimpompo neWestern Cape, yizona izifundazwe ezikhiqize o-A abaningi. Bawu-75 600 kanti amaBachelor awu-141 700 kuzwelonke.
IKwaZulu-Natal ibinabafundi abawu-151 258 ababhalise ngokugcwele, bawu-41 009 abebebhalise ngokungagcwele, bawu-13 103 ababhale imfundo yabadala.